Runta Ku Saabsan Xoogsheegtada Mareykanka - Taranka
Cabsi badan? Dagaal badan? KA FIKIR markale. The Dagaalyahan Mareykan ah eeygu waa wax uun
Loogu talagalay si gaar ah loogu talagalay wehelnimo , Eygan ayaa ku ag joogi doona ilaa geeridu aad kala baxdid.
Noocyada Bully, fikradaha gardarada ah iyo takoorka ayaa caan ah.
Waxaan halkaan u joogaa inaan kuu sheego wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato Bully-ka Mareykanka, marka waad ogtahay runta ku saabsan eeygan jecel ka hor intaadan go’aansan inay kugu habboon tahay adiga.
Waa maxay Cagajugleyn Mareykan ah?
Loo Dhisay Sidii Taangi
Loogu talagalay inuu noqdo Saaxiibkaaga Ugu Fiican
Tababarida Cagajugle Mareykan ah
Xaqiiqooyinka Caafimaadka Bully American
Helitaanka Kalkaalinta Cagajuglaynta Mareykanka ee ugu Fiican
Noocyada Eyga oo La Mid ah Dulmiga Mareykanka
Gunaanad: Dulmiga Mareykanka ma kuu yahay Taranka?
Dulmigii ugu horreeyay ee Mareykan ah ayaa lagu soo dhex saaray Mareykanka intii u dhaxeysay 1980 iyo 1990.
Fikrad khaldan oo caadi ah ayaa ah inay la mid tahay Dibi Bull. Kani waa AAN RUN AHAYN . Bully-ka Mareykanka wuxuu leeyahay hiddo-wadaha 'Pit Bull' asalka asalka hidde-ahaantiisa, laakiin noocyada kale ee Bull Dog ayaa sidoo kale lagu dhex-daray, taasoo siinaysa Bully-ka Mareykanka kala-saarkeeda.
Waa hidda-socod ka durugsan Godka Bull ayaa ahaa shil ma midkoodna. Kalkaaliyeyaasha naxariista leh waxay raadinayeen eey leh dhisida ciyaaraha fudud iyo a darawal dagaal hoose. Sifooyinkaani waa sida saxda ah sababta Caga-jugleyda Mareykanka ay dhaqso ugu soo kaceyso inay tahay mid ka mid ah noocyada ugu caansan maanta.
Dulmiga Mareykanka waxaa si rasmi ah u aqoonsaday Naadiga Dulmiga Mareykanka sanadii 2004, halkaasoo asalka dhalashadiisa la diiwaangeliyey isla markaana heerka ilaalada la ilaaliyo. Waxaa aqoonsaday Naadiga Keena ee United sanadkii 2013.
Waad isbarbardhigi kartaa Dibi Bull iyo Bahal Mareykan ah fiidiyowgaan:
Cagajugleynta Mareykanka waxay soo bandhigtay astaamo u gaar ah Xoogsheegashada, sida a hore ballaaran, lafo culus, madax squarish ah leh daamanka waaweyn iyo gaaban, lugaha muruqyada. Dabada ayaa dheer oo aan waligeed ku xidhnayn.
Noocan ayaa soo gala 4 cabbir . Waa tan waxa aad u baahan tahay inaad ogaato.
Heerka: Tani waa a 20 gudaha (51 cm) ey dhexdhexaad ah oo leh muruq iyo madax xannibaad.
Jeebka: Eygan ayaa gaadha 17 inji (43 cm) iyo, sidaad u maleyn karto, inuu eey cabbirkiisu yar yahay.
XL: Wiil weyn, nuucaan ayaa gaara dherer ah 20 inji (51 cm).
Caadiga ah: Cagajugleyn Mareykan ah waxay wadaagaan cabirro isku mid ah kan caadiga ah, laakiin waxa ka soocaya saddexda nooc ee kale ayaa ah dhismihiisa. Jirka caadiga ahi waa yar yahay, lugaha dhaadheerna waa laalaaban yahay. Caadiga ah ayaa la yiri u eg Dibi Dibi in ka badan noocyo kale.
Marka laga hadlayo miisaanka cagajuglaynta Mareykanka, way ku kala duwan tahay dherer kasta. Xaqiiqdii, dhammaan dadka wax dulma ee Mareykanka waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin kuwo cabbirkoodu heer yahay illaa 1 sano jir. Celceliska miisaanka culeyskani wuxuu u dhexeyn karaa 66 ilaa 88 lb (30-40 kg).
Sababtoo ah kala duwanaanta dhererka / culeyska kala duwan, Dulmiga Mareykanka wuxuu sameeyaa mid ku habboon xaalad guri kasta , hadday tahay dabaq magaalada ku yaal ama guri daarad leh. Kaliya soo qaado cabirka adiga kugu habboon.
Haddii aad aragto noocyada 'Pocket Bully', 'Micro' ama 'XXL' noocyada ay xayaysiiyaan xayawaannada, la soco in ereyadani yihiin ma aqoonsana ABKC.
Haddii aad hesho Xoog-u-sheegasho Mareykan ah oo aad u tixgelinaysid bandhigyo ey ee xirfad ahaan ah, maskaxda ku hay in eeyaha aadka u yar ay badanaa yihiin la ganaaxay ama xitaa laga reebay ku habboonayn dhererka la filayo.
Dayactirka Jaban ee Mareykanka
Mid ka mid ah astaamaha ugu wanaagsan ee noocani waa sida dayactirkiisu u hooseeyo. Ciyaaraha Bully ee Mareykanka a jaakad gaaban oo siman taas ayaa soo gali karta qaab midab kasta.
In kasta oo ay tahay MA aha hypoallergenic , jaakadu waa daadinta hoose. Waxaad u baahan doontaa oo keliya inaad cadayato Bully-kaaga toddobaadkii hal mar. Looma baahna hagaajiye, markaa taasi waa xoogaa lacag dheeraad ah oo ku sii jirta jeebkaaga!
Maskaxda ku hay in eeygan uu ku habboon yahay cimilada kulul. Haddii aad ku nooshahay gobol qabow qaba, waa inaadan Dulmigaaga Mareykanka ku hayn dibadda si joogto ah.
Xoog-u-sheegashada Xoog-sheegashada Mareykanka
Dadka qaar ayaa ka shakisan cagajugleynta Mareykanka sababo jira awgood. Markii hore waxaa laga soosaaray Bull Pit, waxay leedahay muuqaal cabsi leh waxaana badanaa loo adeegsadaa eey waardiye ah.
Way adkaan kartaa inaad indhahaaga ka jeexdo daamanka waaweyn ee Maraykanka. Laakiin, miyay yihiin birqabatooyin bir ah oo ay tahay in laga baqo?
Waan u heli kari waayey qiyaas qayaxan oo ku saabsan xooggan qaniinyada taranka ee PSI. Laakiin, waan eegi karnaa God dibi iyo Bulldog Mareykan ah si loo helo faham wanaagsan.
Dulliga Godku wuxuu leeyahay PSI ee 235 . Tani waa xoogaa celcelis ahaan qaniinyo qaniinyo ah marka la barbar dhigo eyda kale. Si kastaba ha noqotee, waa intaa ka sii badan tahay sumcadda halista ah iyo xididdada dagaalka eeyga taas oo ka dhigaysa qaniinyada Pit Bull in laga baqo.
Xoog qaniinyada Mareykanka ee Bulldog waa 305 PSI , kaas oo xirxiraya inbadan oo feer ah marka loo eego Dulliga Godka. Noocani looma tixgeliyo mid gardarro ah, oo la wadaagaya sumcadda 'Bully American' inuu yahay eey qoys jilicsan.
Kuwani waa labadaba Bully breeds, sidaa darteed waxaan ku soo ururin karnaa in xoogga qaniinyada Xoog u sheegashada ee Mareykanka uu noqon karo meel u dhaxeysa 200 iyo 300 nooc PSI ah.
Nooc kasta oo ey ah wuu qaniini karaa si adag, laakiin waxay kuxirantahay milkiilaha iyo qadarka bulshada eygu helay ee go’aamiya dhaqankiisa. Sidaa darteed, tani maahan xoog qaniinyo laga baqo!
Haddii aad raadineyso eey wehel ah, Dulmiga Mareykanka ayaa ah xulasho aad u fiican. Ka dib oo dhan, eeygan waxaa loo kariyay si gaar ah booska.
Marka loo eego heerka sinjiga, tani waa a kalsooni leh iyo Bulsho Eey. Uma baahnid inaad ka walwasho dhaqan aan la saadaalin karin ama edeb-darro ah.
Cagajugleynta Mareykanka ma ahan mid shaki ama feejignaan leh. Taabadalkeed, way khiyaanayn doontaa si ay ula kulanto asxaabtaada, iyadoo si dhakhso leh uga mid noqota shaqaalaha.
Maxay yihiin qaar ka mid ah astaamaha kale ee loo adeegsado in lagu sharaxo shakhsiyadda tarankaas? Daacad, kalgacal iyo debecsan liiska sare.
Cagajugleynta Mareykanka waa caqli badan , sugid iyo daawashada kahor dhaqaaq. Waxay jeceshahay inay ku farxiso, markaa waxaad ka filan kartaa inay si dhakhso leh wax u barato oo ay ugu jawaabto si aan leex leexad lahayn addeecid.
Tani waa a firfircoonaan badan pup, markaa maskaxda ku hay in haddii aysan helin fadhigeeda maalinlaha ah ee gubista kalori, ay u qaadan karto kabahaaga ama alaabta guriga.
Miyuu noocani sifiican ula shaqeeyaa carruurta?
Bull The Pull waxaa loo yaqaan ' Eey Nanny ”Taariikhda oo dhan, sidaa darteed layaab maleh in Dulmiga Mareykanka loo yaqaan inuu yahay mucjiso agagaarka kuwa yaryar.
Dagaal ma jiro, xoolo dhaqasho ma jirto, iyo isqarxin la'aan! Haddii eeygaagu yahay bulsheed wanaagsan , waxaa loo jiidi doonaa dhaqanka carruurta ee aan daryeel lahayn. Roughhousing waa caadi, jawaab kama bixin doonto. Taa baddalkeeda, Cagajuglaynta Mareykanku waxay u oggolaan doontaa carruurta inay korkeeda oo dhan fuulaan!
Nooc kastoo aad leedahay, waa lagugula talinayaa inaad weligaa ha uga tegin eey kaligaa ilmo yar.
Ma ku fiicantahay xayawaanka kale?
Cagajugleynta Mareykanka waa dabiici ahaan eey bulsho. Waxay jeceshahay inay la joogto dadka kale, oo ay ku jiraan xayawaanka rabaayadda ah. Sida nooc kasta, isdhexgalka bulshada laga bilaabo da'da hore ayaa fure u ah hubinta in ardaygu noqon doono raaxo leh xaaladaha cusub .
Waxaan wax badan ka hadli doonaa isdhexgalka bulshada wax yar ka dib, laakiin guud ahaan, Cagajugleynta Mareykanku waxay sameysaa baashaal weyn oo guriga dhexdiisa ah xayawaankaaga kale ama baarka eyga.
Cagajuglaynta Mareykanku ma tahay mid Gardaro leh?
Aan joojinno oo aan kawada hadalno gardarrada eyga. Iyada oo loo yaqaan 'Bully breeds', gaar ahaan eey leh xididdada loo yaqaan 'Pit Bull', fikradaha khaldan iyo fikradaha qaldan ayaa caadi ka noqday.
Shaki kuma jiro, eeyahaani waa kuwo qallafsan, dhaqaaqaya oo murqo leh. Waxay ku fiicnaadaan cayaaraha waxayna ku qaadi karaan caqabad kasta oo jireed ganaax.
Waxay sidoo kale u muuqdaan kuwo adag, oo leh murqaha ruxruxa iyo daamanka bahalnimada leh.
Dhibaatadu waxay ku jirtaa dagaalka eyda . Cagajuglaynta (gaar ahaan Bulls Pit) waxaa si xoog leh loogu isticmaalaa cayaaraha dhiiga xun. Eeyaha waxaa si gaar ah loogu barbaariyaa gardarrada, carqaladeeya astaamaha dabiiciga ah ee daacadda u ah.
Eeyadan ayaa kala ah maahan heerka sinnaanta. Waxaa ku xadgudbay bini-aadamka, taasoo u horseedda jahwareer ka dhasha arrimaha dhaqanka.
Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in laga fekero goorta doorashada breed, si loo hubiyo inaad iibsato eey yar oo ku bilaabay nolosha jawi jacayl.
Marka, MAYA Cagajugle Ameerika waa aan asal ahaan dagaal lahayn . Dhammaan waxay kuxiran yihiin hidaha, taranka, iyo tababarka (taas oo, loogu talagalay wax uun ku saabsan eyga).
Haddii aad go'aansato inaad ku dhufatid tababaraha eyga xirfad leh ama aad rabto adigu qaado tababarka hubaal waa lagugula talinayaa loogu talagalay Bully American.
Kani waa eey shaqo doon ah waxayna noqon doontaa mid adeecda intii karaankooda ah si ay uga farxiso milkiilaha ay jeceshahay.
Milkiile ahaan, waa muhiim inaad noqotid kalsooni, dulqaad iyo adkaysi leh , marna muujin niyad jab. Kaliya ma caawinayso tan bar eyga oo ah madaxa , laakiin waxay kobcinaysaa jawi ixtiraam leh iyo raacida xeerarka.
The 3 hababka tababarka ugu wanaagsan ee loogu talagalay jinsiga Bully American
1. Tababbarka sanduuqa
Ey yaryar ee loo yaqaan 'Bully puppy' waxay leeyihiin la'aanta kontoroolka kaadi haysta ilaa 3 bilood jir . Tababbarka sanduuqa waa in la dhaqan galiyaa isla marka aad ilmahaaga guriga keento.
Waqti yar ku qaadashada sanduuqa ayaa ka caawinaya abuurida nidaam joogto ah. Sidoo kale, eeyaha si dabiici ah ma rabto inaad saxarooto halka ay jiifaan.
Sanduuqa ayaa noqday “god” caan ah oo shakhsi ahaaneed halkaas oo eeygaagu ka dareemi karo dabacsan oo ammaan ah.
2. Tababar adeecid
Adeeciddu waa astaamo ay caan ku yihiin tarankaani. Xoog u sheegashada Mareykanka waxay ka timid a eyga shaqeeya asalka ah wuxuuna baran doonaa inuu dhaqso u raaco amarrada. Taasi waa sababta ay si fiican ugu qabtaan bandhigyada oo ay si weyn u sameeyaan ilaalada / eeyaha adeega.
Adoo horumarinaya adeecida goor hore, waxaa lagugu abaalmarin doonaa eey la isku halleyn karo, edeb leh oo fahamsan adigaa masuulka ah.
Waad kireysan kartaa tababare xirfad leh, laakiin haddii aad adigu sameyso, hubi inaad ku dhegan tahay qorshe. Iswaafaqsanaanta ayaa fure u ah tababarka noocan ah. Waxaad sidoo kale u baahan doontaa isdeji , weligaa ha ku qaylin ama ha ku siin niyad jab.
Tani waa habka ugu muhiimsan ee tababbarka loogu talagalay Xoogsheegtada Mareykanka. Way la yaab badan tahay carruurta laakiin way noqon kartaa joog-jooji eeyaha kale ilaa si fiican u dhexgalka bulshada laga bilaabo da'da hore.
Waxaad ku bari kartaa eeyaha kale adoo u keenaya xadiiqada eyga maalmaha fasaxa ah. Ku sii hay xadhig una oggolow inay si tartiib tartiib ah ugu dhowaato asxaabta dhogorta leh si ay ula kulanto-iyo-salaamid. Dhawaan, rabitaankeeda dabiiciga ah ee ah inay banaanka u baxdo ayaa la wareegi doonta oo waxay gilgili doontaa dabadeeda si ay ula kulanto qof walba.
Marka laga hadlayo caafimaadka, Cagajugleynta Mareykanka si wanaagsan ayey wax u qabataa. Waxay leedahay celcelis cimri ah 8 ilaa 12 sano.
Nooc kasta oo ey ah, waxaa jira cudurada hidaha waa wax caam ah waana in laga fiirsadaa. Isla sidaas oo kale wuxuu u socdaa Bully American. Sida ugu wanaagsan ee looga hortagi karo cudurradan ayaa ah inaad taxaddar sameyso markaad dooraneyso abuure. Mar dambe ayaan ku garaaci doonaa tan!
Halkan waxaa ah liis ku saabsan arrimaha caafimaadka Bully American-ka ee ugu caansan.
Hip Dysplasia: Hip dysplasia waa cillad welwel leh maxaa yeelay lama ogaan karo ilaa eygu ka weynaado. Kordhinta aan caadiga ahayn ee sinta misigta waxay u horseedaa cillad xanuun leh taas oo aakhirka keenta luminta dhaqdhaqaaqa ama curyaannimada.
Dillaac / bushimaha: Waqtiga xaadirka dhalashada, tani waa cillad xagga sare ama dibnaha ah. Maaha wax nafta halis gelinaya, laakiin si uun isu qurxin ah. Qalliin fudud ayaa ah waxa kaliya ee loo baahan yahay in lagu xalliyo xaaladdan.
Jeexitaanka patella: Tani waa koritaan aan caadi ahayn oo sababa jilibka eeyga eey kala baxaan.
Wadnaha oo shaqadiisa ku xumaada: Tani waa xaalad khatar ah oo wadnaha uu weynaado. Tani waxay keenaysaa in dheecaano lagu sii daayo jirka oo dhan.
Demodectic mange: Kani waa dulin sababa timo lumis iyo qolofta maqaarka.
Ichthyosis: Tani waa arrin maqaar oo keenta isku-xoqid iyo fiiqid suufka suufka.
Atopy: Tani waa xasaasiyad maqaarka oo caadi ah oo ku dhacda eeyaha waxayna keentaa raaxo la'aan.
Abiotrophy Cerebellar: Nasiib wanaagse, xaaladdan waxaa lagu ogaan karaa maalmo kadib markii eydu dhasho. Cudurkan hidde-wade wuxuu ku dhacaa maskaxda iyo habdhiska neerfaha.
Atrophy-ka Retinal Horusocod: Tani cudurka indhaha wuxuu sababayaa tartiib tartiib ah aragga. Daaweyn la'aan, waxay u horseedi kartaa indho la'aan.
Hypothyroidism: Arrinta tayroodh awgeed, firfircoonaanku wuu yaraadaa miisaankuna wuu kordhaa.
Cataracts: Kani waa cudur kale oo indhaha ku dhaca oo keena in eey si tartiib tartiib ah aragga uga baxo. Waxaa lagu sixi karaa qalliin.
Waqtiga cagajuglaynta Mareykanka
Waxaa lagugula talinayaa inaad quudiso Xoog u sheegashadaada Mareykanka 3 jeer maalintii.
Quudinta Cagajugleyn Mareykan ah ayaa tixgelin gaar ah siineysa tan iyo markii noocyadan ay dhibaato ka soo gaarto cayilka, xasaasiyadda maqaarka , iyo gaas . Adoo ku dheganaanaya cunto dheellitiran oo caafimaad leh, dhibaatooyinkaas waa laga hortagi karaa.
Waad dooran kartaa cunnooyinka ceyriinka ah, oo ay ku jiraan khudradda dabiiciga ah, miraha, hilibka xubnaha, kalluunka, doofaarka, digaagga iyo ukunta. Cunnadan waxay ka kooban tahay nafaqeyn mana jirto wax ka-ilaaliyayaasha ah, waxyaabaha lagu daro, iyo kuwa buuxiyo ee laga helo kibble eeyaha dhaqameed.
Joogtaynta cunnooyinka cunnada cayriin waxay qaadan kartaa waqti iyo qaali qaarka qaar. Bedelkeeda, dooro premium, cuntada eey heer sare ah ee loogu talagalay Bully-kaaga Mareykanka. Hubso inay ku jiraan borotiin iyo kaarbooyin fara badan (maahan hadhuudh).
Iyadu waa jimicsi jimicsi
Cagajugleynta Mareykanka waa saaxiib firfircoon oo jecel ciyaarta waqtiga. Waxaad u baahan doontaa inaad jimicsi iyada ugu yaraan hal saacad maalin kasta, o haddii kale waxay ka aargoosan doontaa iyadoo guriga dhexdiisa burburinaysa.
Halkan waxaa ku yaal fikrado si aad u ilaaliso Cagajuglayntaada Ameerikaanka ah oo aanad caajisin
Socodka: Tani had iyo jeer waa ikhtiyaar wanaagsan! Eygaaga u kaxee socod dheer oo socod socod ah oo ku yaal baarkinka ama xitaa jidadka socodka ee dabiiciga ah.
Dabaasha: Tani gaar ahaan wey fiicantahay haddii aad ku nooshahay aag kulul. Dabaasha waxay u fiican tahay eeyaha iyo iftiinka kala-goysyada. Kub ku tuur barkadda oo fiirso Dulmigaaga Ameerikaanka ah ee sameynaya buufin.
Tababarka firfircoonida : Kaliya maahan in eydaan jir ahaan, laakiin maskax ahaan sidoo kale. Koorsada tababarka dhaqdhaqaaqa, waxaad ku adkeyneysaa adeecida.
Baaskiil wadid Ku billow jimicsi adigoo tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah u leenaya Dhawaan ayaa idinku filan labadiinu waad jeexjeexi doontaan waddooyinka.
Alaabada iyo xujooyinka: Maalgashi ku samee alaabada adag ee la ruugo si aad u siiso Bajaajleydaada Mareykanka wax aad ku qaniinto maalinta roobka ee aan kabahaaga aheyn. Halxiraalaha eygu waxay kiciyaan maskaxda, taas oo ah wax ay ku raaxaystaan ​​noocani.
Haddii lahaanshaha xoog u sheegashada Mareykanku ay ugu sarreyso liiskaaga waxqabadka, ka dib aan u quusno mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee tilmaamahan: helitaanka kuwa soo saara.
Marka hore, u diyaarso inaad soo saarto cajiinka culus. Heerka qiimaha Bully American-ka ayaa u dhexeeya $ 2000 iyo $ 5000 . Tani waa eey caan ah!
Waxaad u maleyn kartaa in helitaanka eyga ey fududahay sida raadinta Google. Dhab ahaan, waxaa jira calan badan oo casaan ah oo loo fiirsado marka la dooranayo breed.
Waxaad ubaahantahay inaad waxbarto naftaada sida loo maro marinkaaga eey oo dhan si aad ugu degto guuleyste.
Sidee uga fogaan kartaa mashiinka eyda?
Ballan ka sameyso si aad u booqato abuure . Mashiinka eeyaha yaryar ma rabaan inaad aragto xaaladaha ka baxsan bini’aadanimada ee ay ka soo saaraan eeyaha sida warshad.
Bixiye anshax leh ayaa kugu martiqaadaya booqasho, ku faraxsan inuu ku tuso adiga. Waxaad arki doontaa haddii eeyadu ay ku ciyaaraan banaanka haddii ay la kulmaan xayawaannada kale iyo dadka waxaadna la kulmi doontaa waalidiinta.
U raadi eey yar oo waxoogaa ka qaalisan. Waxaad bixinaysaa tayada, khadadka dhiigga ee saafiga ah, iyo dammaanadaha caafimaadka.
Weydiiso caddeyn caafimaad. Soosaara sumcad leh ayaa dhallaanka yaryar eegi doona dhakhtarka xoolaha oo laga nadiifin doonaa cudurrada hidaha, sida hip dysplasia.
La kulan oo salaama waalidiinta . Tani waxay kuu sheegi doontaa tuulmooyin ku saabsan asalka caafimaadka iyo astaamaha kale ee hidde-side.
Weydiiso markhaatiyo. Akhrinta wixii ku saabsan waayo-aragnimadii macaamiisha ee hore waxay ku siinaysaa sawirka dhabta ah.
Cilmi baaris marka hore. Marka laga hadlayo Bulashada Ameerika, qaar ka mid ah kuwa aan anshaxa lahayn ayaa ku ridi doona eeyaha sitoos ah si ay ugu muuqdaan murqo badan. Kaliya taasi khatar kuma aha caafimaadkooda, laakiin xoogaa ka dib, steroids waxay xirmaan si ay u muujiyaan eey yar oo aadan oggolayn.
Waxay ku saabsan tahay weydiinta su'aalaha! Waa inaad diyaar u ahaato inaad weydiiso su'aalaha breed iyo wixii ka soo horjeedaba.
Isirjire xamaasadeysan wuxuu jecel yahay eeyahooda oo wuxuu rabi doonaa inuu hubiyo inay aadaan milkiile mas'uul ah. Xitaa waxay rabaan inay xiriir la yeeshaan bilaha ugu horreeya eey eey guriga ku raacaan.
Waxaan kugu soo koobnay kuwan sumcadleyda caanka ah ee Mareykanka ee Bully si aad u hubiso.
Razor’sEdge Bullies : Socdaa
Shaydaanka Ibliis : ISTICMAAL
Xoog u sheegashada Texas: FL
Samatabbixinta iyo hoyga Mareykanka
Qiimahaas cusub ee qiimaha eeyaha ayaa laga yaabaa inay ka maqnaato meelaha aad gaari karto. Dhib malahan! Waxaad ka heli kartaa Bililiqada Mareykanka qurux badan badbaadinta.
Eeyadan macaan waxay sugayaan inay aadaan gurigooda weligood oo ay jacayl kugu qubeeyaan. Waa kan Liiska badbaadinta Xoog-u-sheegashada Mareykanka iyo hoyga. Waxay soo bandhigaan noocyo kala duwan oo Bully ah, laakiin waad iska hubin kartaa dibindaabyada Mareykanka.
Samatabbixin Caannimo Caga Daran : FL
Kooxda Kubadda Cagta ee New York : CUSUB
Koonfurta Badbaadinta Xoogsheegashada : SC
Noocyada cagajuglayntu waxay wadaagaan hal shay: Waxay ku abtirsadaan kuwii hore Molosser eeyaha, sida kuwa Canis Panther, ama Bandogge Mareykan ah , taas oo ah isku dhafka noocyada kala duwan ee Molosser.
Badanaa waxaa lagu muujiyaa sida dagaal badan , Noocyadan ayaa u muuqda kuwo culeys xambaarsan khatartiisa leh. Sumcaddan awgeed, eeyaha qaarkood, sida Pit Bull, waa mamnuuc gobolada qaarkood.
Runtu waxay tahay, Bulashada cagajuglayntu maaha mid si dabiici ah u dagaal badan. In kasta oo ay u muuqan karaan cabsi gelin dhisme muruq ah, haddana dhab ahaan waa eeyo wehel u ah qalbigooda. Waa sida bini-aadamku ula dhaqmo una kiciyo xayawaankooda xayawaanka ah ee go'aamiya dhaqanka.
Waxaa laga yaabaa in Xoogsheegtada Mareykanku aanu adiga kuu ahayn. Taasi waa ok, waxaa jira noocyo kale oo badan oo caan ah Bully.
Halkan waxaa ku yaal liistada eeyo wadaaga egyihiin.
Mareykanka Staffordshire Terrier
Territoriga Dibi Yaryar
Olde Ingiriis Bulldogge
Waxa kale oo laga yaabaa inaad rabto inaad iska hubiso Gunta yar Ingiriisiga Bulldog .
Dagaalkii Mareykanka iyo Pit Bull: waa maxay farqiga u dhexeeya?
Jaleecada hore, waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso waxa labadan nooc ka dhigaya kuwo aad u kala duwan. Xaqiiqdii, waxaa jira dhowr faraq oo muhiim ah.
Qodobka ugu weyn ee lagu garto waa muuqaalka jirka . Cagajugleynta Mareykanka waxay leedahay madax ballaaran oo leh sanka sanka marka loo eego wejiga cidhiidhiga badan ee God dibi .
Cagajugleynta Mareykanka waa ka gaaban marka loo eego Dulliga Godka, badanaa sababta oo ah lugaheeda. Kaliya nooca caadiga ah ee cagajuglaynta Mareykanka ayaa la ogyahay inuu leeyahay luga celcelis ahaan.
Markay tahay dhismo, Dulliga Godka waxaa hubaal ah inuu caan ku yahay muruqiisa iyo murugadiisa, laakiin muruqu waa mid ka mid ah astaamaha ugu waaweyn ee Bully American-ka loo soo saaray si uu isu muujiyo. Lafaha culus, xabadka ballaaran iyo astaamaha qaro weyn ayaa ka dhigaya geedka adag.
American Bully iyo American Bulldog ma isku mid baa?
Jawaabta oo kooban waa MAYA , iyagu isku isir ma aha.
The Bulldog Mareykan ah waa astaan ​​dhaqameed, isagoo in badan ka dheeraa Xoog-sheegashada Mareykanka. Markii hore waxaa laga soosaaray kan hadda dabar go'ay Old English Bulldog , oo ay soo geliyeen Mareykanka soo galootiga.
Bulldog-ga Mareykanka ayaa loo kariyay shaqada beeraha , iyo sidoo kale bandhigyo ey iyo isboorti. Cagajugleynta Mareykanka, dhanka kale, waa laan ka mid ah Bullka Bull, looguna talagalay wehelnimo.
Runtii waad u sheegi kartaa labadan nooc iyaga oo kala ah muuqaalka jirka . Bulldog-ka Mareykanka ayaa ka dheer, leh lugaha dhaadheer iyo jidh fudud oo fudud. Madaxa ayaa ka dheer kan Bully-ka Mareykanka.
Waxaa loo dhisay sidii bahalka oo kale, Cagajugleynta Mareykanku waa murugo muruq! Ha dareemin inaad ka nixiso laabtaas ballaaran, weyn iyo daamanka ballaaran. Eygan wuxuu leeyahay jacayl badan oo uu bixiyo.
Aynu ku samayno dib-u-soo-kabasho deg deg ah oo ku saabsan taranka, oo waad go'aansan kartaa haddii ay tahay ciyaartaada.
Si aad u balaaran wehelnimo
Cagajuglaystayaashu waa “Eeyaha Nanny”, sidaa darteed iyaguna sifiican ula dhaqan carruurta
Aad u caqli badan oo fudud in la tababaro
Qurxinta dayactirka oo hooseeya ( MA aha hypoallergenic )
Ku habboon guryaha iyo guryaha sababtoo ah noocyo badan oo cabbir ah
Heerarka bandhigyada, tartamada iyo eey adeeg ah
Waxaad u baahan doontaa inaad waqti ku filan u hurto tababarka, gaar ahaan is dhexgalka bulshada . Tani waa lagama maarmaan si loo dhiirrigeliyo kalsoonida eyda kale iyo dadka kale.
Cayilka, gaaska, iyo xasaasiyadda maqaarku waa wax caadi ah, sidaa darteed caafimaad qaba (mararka qaarkood qaali) cuntada waa lagama maarmaan.
Tamar sare waxay ka dhigan tahay jimicsi maalinle ah waa lama huraan in laga fogaado dhaqan xumada.
Maxaad u maleyneysaa Dulmiga Mareykanka? Noo sheeg faallooyinka!
Malamute vs Siberian iyo Alaskan Husky: Waa maxay farqiga u dhexeeya?
Macluumaadka Taranka Maltese Shih Tzu
boston Terrier ama faransiiska bulldog
imisa ayay yihiin eeyaha adhijirka jarmalka husky
buur madow cur mix
magacyo waaweyn oo eey ah oo ragga ah